Shina Silicone Cable Winders orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Manana olana amin'ny taribinao ve ianao amin'ny telefaona finday, tariby mandeha amin'ny herinaratra ary kojakoja hafa? Manoro hevitra izahay hampiasa ireo entana mety amin'ny winders tariby silikaly mba hahatonga azy ireo milamina sy milamina. Ny winders tariby silikaly dia eco-friendly ary tsy misy poizina, malefaka sy malama izy ireo hatao amin'ny diff ...
Manana olana amin'ny taribinao ve ianao amin'ny telefaona finday, tariby mandeha amin'ny herinaratra ary kojakoja hafa? Manoro hevitra izahay hampiasa ireo entana mety amin'ny winders tariby silikaly mba hahatonga azy ireo milamina sy milamina. Ny winders tariby silikola dia tia eco sy tsy misy poizina, malefaka sy malama izy ireo hatao amin'ny endrika samihafa, izay mitazona tanteraka ny tariby.
Ny fanomezana Pretty Shiny dia namoaka endrika namboarina, maimaim-poana ireo bobongolo ho an'ireo volavola efa misy ireo. Ny ekipa teknikanay matihanina dia afaka manamboatra endrika sy endrika mifanaraka amin'ny zavatra takinao, ary hanome sosokevitra bebe kokoa amin'ny antsipiriany. Etsy ankilany, ny logo izay vita pirinty na miloko feno ny valin'ny fantsom-pandrefesana dia azo namboarina mba hanao dokambarotra momba ny tetikasa rehetra araky ny fangatahan'ny mpanjifa. Ny winders tariby silikaly dia tsy fitaovana fotsiny handoavana ny toeram-piasanao, fa koa fantsona tsara hanehoana ny hevitrao na ny hevitrao.
Teo aloha: Mpihazona karatra silika
Manaraka: Tady Silicone
Keychain taratra taratra LED lamaody